Isikhwama sokuhlunga sothuli sihlukaniswa kanjani futhi sephukile? - ISffiltech
Ikhaya » Blog
Isikhwama sokuhlunga sothuli sihlukaniswa kanjani futhi sephukile?
Isikhathi: 2018-01-29 Hits:
filter bag is to remove dust and pollutants in the bag house. The dust removal mechanism is mainly used to filter dust on the surface of the filter media. Prominent feature is the high dust removal efficiency, dust exhaust through the filter bag, the emission concentration is generally stable to reach 50mg / m ³ ngezansi, noma kuze kufike ku-5mg / m ³. Izidingo zanamuhla zokuvikela imvelo ziyanda futhi ziphakeme namhlanje, isikhwama Ukususwa kothuli lwendlu kunezinye izinzuzo ezingenakuqhathaniswa.
Izinhlobo nezimbangela zomonakalo wokugcotshwa kothuli
Ukulimala kokuhluleka kwesikhwama sothuli kuvame ukugqokwa, ukusha nokugqwala.
Ukugcwala kwashunqa kubangelwa ukuphathwa kwegesi yokushisa engejwayelekile ye-flue, noma izinhlayiya zokushisa eziphakeme, izinga lokushisa liphezulu kunokubekezelela lokushisa kwesihlungi, ukuze izingxenye eziphakeme zokulimala nokulimazeka kuqhubeke.
Ukugqwala kwesikhwama kubangelwa yizakhi eziyingozi ekuphenduleni kwamakhemikhali weflue i-flue, okuholela ekunciphiseni izakhiwo zemishini zokulimaza nokuhluleka. Ukugqwala okungaphezulu kwezikhwama zokuhlunga kuvela ekuqukweni kwegesi ye-flue edlula imibandela, kungahlukaniswa kube ukugqwala kwegesi nokugqwala koketshezi, ukwakheka kwegesi okulimazayo lapho kukhona uketshezi, okungenzeka kubange ukulimala esikhwameni sokuhlunga.
Ngenxa yobukhona bezinto eziwuketshezi ku-flue gesi (njenge-condensation), ukwakheka kokunamathisela uthuli, ukuvimba igebe lesikhwama sokuhlunga, okuholele ekutheni isikhwama sothuli kuholele ukwehluleka kothuli.
Isikhwama sothuli sigqoka ukuvimbela nokwelashwa
Ukugcwala isikhwama somlomo wesaka:
Isikhwama somlomo wesikhwama sigqoka okuningi ephaketheni phansi singu-400mm noma ngaphansi, ikakhulu kusuka ngaphakathi nangaphandle kokutholwa okonakele. Lolu hlobo lokugqoka ngaphambi kwesikhathi lubangelwa ikakhulu ukushaya komoya okuphoqekile okuhlukaniswe phakathi kwesikhwama, ukufafaza ngqo okubangelwa izindonga eziseceleni zesikhwama sokuhlunga. Ohlangothini oluchezukisayo lokuguguleka okuqhubekayo komoya ocindezelwe, isikhwama ngaphakathi koqimba lokuqala lomoya ocindezelwe ukuqhuma, bese kuthi ukushaywa kwendwangu, bese kuthi ekugcineni indawo yokuhlunga nayo ishaye. Lapho uhlangothi lwesikhwama sokuhlunga lonakalisiwe, ukumelana kwengxenye eyonakele kuzokwehla, bese kuthi igesi yokugcwala enothuli ingene ngokushesha isuka engxenyeni elimele bese ikhahlela leyo ngxenye eyonakalisiwe nge-diagonally ukuze yakhe i-voids entsha kanye ne-flue gas inlet entsha. Ukulimala komlomo okwenziwa ngomlomo, noma ngabe ikhanda lesikhwama kanye nokuhlukaniswa komzimba wesikhwama. Umonakalo onjalo ucindezelwa kakhulu umfutho womoya uphezulu kakhulu, ukushaya i-tube skew emfushane, ukuguqulwa kweplanethi yezimbali nezinye izimbangela, uma sekutholakele ukugqoka okunjalo, ngaphambi kwesikhwama esisha, ukushaya kwe-blow-back kufanele kuhlolwe noma kulungiswe.
Ukugqokwa kwesikhwama somzimba:
Ukugqokwa kwesikhwama sothuli, ukugoba okujwayelekile kwesihlwathi okuphakathi, kuhlukaniswe ngamacala ambalwa:
Uma izimpawu zomonakalo zivela ngaphakathi ngaphandle, zilimele endaweni yokuxhumana yesikhwama sebha yezikebhe, okubonisa ukuthi isikhwama esilinganiselwe ibha noma ukugqwala, isikhwama sokuhlunga esigqokwa noma umfutho womjovo siphezulu kakhulu, umjovo uvame kakhulu, ukuze isihlungi isikhwama nesikhwama sezingubo ezaphukile Izingosi zokuxhumana eziqhekekile ukuqhuma. Izinkinga ezinjalo zokugqoka zingaxazululwa ngokushintsha ikheji lesikhwama noma ngokulungisa i-blower.
Ingxenye engezansi yokugqoka kwesikhwama sokuhlunga
Ukugqoka okungaphansi kwesikhwama sokuhlunga kuvame kakhulu phansi kwesikhwama sokuhlunga kuya phezulu okungama-300mm noma ngaphansi, gqoka okuningi ohlangothini olulodwa, okuphansi kakhulu, kuyakhanyisa kancane. Intambo yokuthunga yasendaweni izogqokwa, akukho ntambo yokugqoka yokuthunga iqinile. Ukugqoka okunjalo nokudiliza ngenxa yokushintshwa kwebhodi yezimbali, ukuhlukaniswa kwemgodi kuncane kakhulu, ukuguqulwa kwesikhwama sendawo, isikhwama sokuhlunga sikude kakhulu nezinye izimbangela. Isikhwama somuntu ngamunye nesihluzi sodonga lwebhokisi lonakalisiwe. Umonakalo onjalo udinga ukubheka ngokuqinile izinga lebhodi yezimbali, futhi kufanele usebenzise ikheji elenziwe kahle.
Ukugqalwa kwendandatho engxenyeni engezansi yesikhwama sokuhlunga:
Engxenyeni engezansi yesikhwama sokuhlunga esakhiwe yizingxenyeni zangaphandle zokufaka izindandatho. Lolu hlobo lokugqoka nokudilizwa kungenxa yothuli lwe-flue gesi ekuguguleni kwasendaweni okubangelwa yisikhwama sokuhlunga, okubonisa ukuhamba kwendawo yokuhlunga komoya kukhulu kakhulu. Okuvame kakhulu kusiqoqelalwazi sothuli olusezingeni eliphezulu noma okokususa uthuli olunamandla, lapho isikhwama sokuhlunga silimele, ukuguguleka komonakalo we-soot diagonal, njengoba umonakalo uqhubeka wanda, ukulimala okukhulu esikhwameni sokuhlunga kungadala ukuqhuma kwendandatho.
Ingxenye yangaphansi yesikhwama yokugqoka: kuvame kakhulu ukuxhumana nendawo yezikhwama, iningi umehluko phakathi kwekheji kanye nobubanzi bekheji lekheji likhulu kakhulu, okuphumela ekuhlanzweni kwesikhwama nokuhlunga lapho izinga lokuguqulwa likhulu kakhulu, kanye nomonakalo wesikhwama sezikhukhula. Ukufakwa esikhundleni kwekheji yezinga eliphakeme kungasombululwa.
Ngaphandle ezansi kwengubo yokuhlunga:
Indawo ephukile izimpawu ezisobala zokugqokwa nokuklebhula. Ngaphansi kwentambo yokuthunga, indwangu yokuhlunga igqokwa, ibucayi lapho phansi kwesikhwama kulimele noma kucinyiwe konke. Lolu hlobo lokugqoka nokudilizwa kungenxa yezinga lezinto ezibonakalayo ku-hopper liphezulu kakhulu, izinhlayiya zomoya zothuntu zigeleza ngqo kwizikhwama, okuholela ekugqokeni nasekuqhekekeni. Ngokwandisa umthamo wokukhuphuka komlotha, lungisa uhlelo lokususa i-ash hopper, ukugwema ukuqongelela uthuli luphezulu kakhulu, kungavimba ukwakheka kwe-hop hopper ngaphakathi esikhwameni sokuhlunga.
Ngaphansi kwesikhwama sokuhlunga esigqokwa kakhulu ezansi kwekhokhoji lesikhwanyana kuncane kakhulu noma isikhwama eside sokuhlunga, uhlelo lwekhwama lezikhwama lungasekela kuphela phansi kwesikhwama. Ukuhlanzwa kwesikhwama sokuhlunga kanye nokushintshwa kwesihlungi kubangele lapho phansi kwesikhwama kushona, okuholela ekujuleni kwangaphakathi kokugqokwa kwesikhwama.
Isaka lokugcwala ngaphakathi kokugqokwa:
Ukulimala ngaphakathi kwesikhwama kungaphezu kobubanzi bengaphandle lekheji futhi umehluko wesikhwama mkhulu kakhulu, okuholela ekuhlanzweni kwesikhwama sokuhlunga kanye nokuhlunga kwe-switching swing amplitude kukhulu kakhulu, isikhwama ngaphakathi nesikhwama sokuphambana kwe-cage kungukuphazamiseka .
Isikhwama ngaphakathi kwesakhiwo esonakalisiwe ekhejini lesikhwama, kukhona iminonjana yokugqwala lapho sigqokwa, ikakhulukazi ukugqwala kobuso besikhwama okwakhiwe nge-angled oxide ungqimba, ingaphezulu lekheji lesikhwama ngalesi sikhathi njenge-sandpaper, uma nje wonke uhlanza isikhwama kuzoba isikhwama esikhulu sokwehlukana, isikhwama sokugcina sokugqoka. Ukusetshenziswa kwezikhwama ezisezingeni eliphakeme ezifaniswe ukuhlunga izikhwama kugwema ukugqokwa ngaphakathi kwezikhwama zokuhlunga.
Olandelayo: Isebenza kanjani isikhwama sokuhlunga sothuli?